Al Shabaab "Wax Weerar Ah Kama Dhicin Magaalada Jilib warka kasoo yeeray Murtadiinta waa mid aan Sal laheyn" [Warbixin].
Sunday December 30, 2018 - 15:59:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Saraakiil katirsan ciidanka DF-kan ee gummeystaha la shaqeeya ayaa markale warar been abuur ah ka sheegay wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ee shareecada Islaamka lagu maamulo.
Dowladda Farmaajo waxay sheegtay in howlgal ay ka qeyb qaateen ciidamo Soomaali iyo Mareykan ah uu ka dhacay degmada Jilib ayna ku dileen 30 kamid ah dagaalyahananda Al Shabaab!.
Markii warkaasi soo baxay ayaan xiriiro kala duwan la sameynay dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta wilaayada Jubbooyinka si aan wax uga ogaanno waxa kajira warka kasoo yeeray saraakiisha Kooxda Farmaajo.
Ugu horrayn waxaan khadka taleefanka ku helnay mas'uuliyinta wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka waxay noo xaqiijiyeen in haba yaraatee uusan wax weerar ah ka dhicin jilib iyo deegaannada wilaayadu maamusho.
"Warka kasoo yeeray Murtadiinta waan maqalnay waa qeyb kamid ah beentii lagu yaqiinay, majiro wax weerar ah oo ay ka geysteen Jilib iyo deegaannada wilaayada Islaamiga Jubbooyinka waxay doonayaan in guul darrooyinka kasoo gaaraya camaliyaatka mujaahidiinta ay been ku daboolaan" sidaas waxaa yiri mas'uul katirsan wilaayada Jubbooyinka.
Dad ku sugan magaalada Jilib oo aan lahadalnay ayaa iyana no sheegay in haba yaraatee wax weerar ah uusan magaalada ka dhicin xaaladuna tahay mid deggan.
Ma ahan markii ugu horraysay oo ay dowladda Federaalka Soomaaliya ay warar aan jirin ka sheegto wilaayaatka Islaamiga ah, Cabdi Raxmaan Yariisoow ayaa xilligii uu wasiirka warfaafinta ahaa wuxuu sheegay in weerar ciidamadoodu ka fuliyeen Jilib ay ku dileen 80 kamid ah Al Shabaab warkaas oo ahaa been aan sal iyo raad laheyn.